रिडीको तिनमुखे पुल निर्माणमा खै नेताको ध्यान पुगेको ? – ebaglung.com
२०७५ आश्विन ३, बुधबार ०६:१६	Top News, थप समाचार
प्रेम सुनार गुल्मी,२०७५ असोज ३ । प्रशिद्ध धार्मिक क्षेत्र रिडीमा तिन जिल्ला जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको चार बर्ष बित्दा पनि ५ प्रतिशत पनि काम नभई अलपत्र परेको छ । तत्कालिन सांसद तथा नेपाली कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी र तत्कालिन मुख्य सचिव लिलामणी पौड्याललेृ २०७१ मंसिर १५ गते संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
पुलको मुख्य पिलरको केही भाग खेृलाबाट उठाउँदै दुईचार जना कामदारले काम गरिनै रहेको झारा टार्ने मात्रै गरिएको छ । याता पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाका तीनतिरबाट १ सय ७७ दशमलव ४ मिटर लम्वाईको तिनमुखे झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने र मध्य भागमा तीनवटै पुललाई जोड्ने ४२ मिटर अग्लो पिलर बनाउने सम्झौता भएकोृ थियो ।
ढिलाई हुनुमा यस अघि कांग्रेस नेता तथा तत्कालिन सांसद चन्द्र भण्डारीलाई दोषारोपण पनि गरियो । तर अहिले त्यसै क्षेत्रका संघिय सांसद प्रदिपकुमार ज्ञवाली मन्त्री समेत हुनु भएको छ । मन्त्री ज्ञवालीको ध्यान जान नसकेको हो कि ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीका स्वकिय सचिव जंग नेपाली भन्छन –‘ उहाँको ध्यान नगएको होईन , ठेकेदार बेपत्ता भए पछि काम अगाडी बढ्न नसकेको हो । पहिला छुट्टाएकै रकम बराबरको काम नभए पछि अर्को रकम विनियोजन गर्न नमिलेको हो ।
मोटरसाईकल दुर्घटनामा शिक्षक कँडेलको मृत्यु !